हो। TimeTec ले लगभग 120 देशहरूमा 200 भन्दा बढी अधिकृत पुनर्विक्रेताहरू छन्। दयालु देशहरू जहाँ टाइमटेक पुनर्विक्रेताहरू अवस्थित छन् जाँच गर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई ईमेल, स्काइप, Google टॉकको दिन 24 घण्टाको लागि, हप्ताको वर्ष 7-दिन सेवाको माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2. TimeTec सर्भरको स्थान कहाँ छ?
5. कहिलेकाँही इन्टरनेट कनेक्टिविटी स्थिर छैन जब म मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गर्दैछु। के मैले अझै पनि एप प्रयोग गर्न सक्दिन जब इन्टरनेट जडान गुमाएको छ?
यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, टाइमटेक ग्याट मोबाइलमा अफलाइन मोड अझै पनि महत्त्वपूर्ण सूचना भण्डारण र बचत गर्नेछ र अनलाइन फिर्ता भएपछि एकपटक यसलाई सर्भरमा पठाइनेछ।
6. के टाइमटेक मोबाइल एप्स र वेबको बीच डेटा सिङ्क तुरुन्तै हुन्छ?
7. के मलाई टाइमटेक अनुप्रयोग किन्न चाहन्छ वा यसको कुनै पनि इन-एप खरीद छ?
TimeTec मोबाइल एप GooglePlay बाट निःशुल्क स्थापित गर्न सकिन्छ तर तपाईं केवल टाइमटेक गश्ती संग सदस्यता लिँदा मात्र यो पूर्णतया उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
8. TimeTec गश्ती कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समय के हो?
यसले तपाइँको कम्पनीमा कति कर्मचारीहरू र तपाइँको समय तालिकाको कति जटिल छ भन्ने निर्भर गर्दछ? तपाईं यसलाई एक घण्टाको बारेमा वा ठूलो संगठनको लागि यो लामो समय लाग्न सक्छ। कुनै चिन्ता छैन, टाइमटेक समर्थन त्यहाँ तपाईलाई सहयोगको लागि सधैँ हुनेछ।
9. मेरो क्लाउडमा मेरो डेटा कति सुरक्षित छ?
10. के मलाई टाइमटेक गश्ती प्रयोग गर्न प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ?
सौभाग्य देखि, नहीं। TimeTec गश्ती सबै ब्राउजर र सबै मोबाइल यन्त्रहरूमा काम गर्दछ। तर तपाईले टाइमटेक ग्याट मोबाइलको लागि पढ्नको लागि तपाईंको मार्गहरूमा एनएफसी ट्यागहरू स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ।
11. मैले टाइमटेक गश्ती कहाँ खरीद गर्न सक्छु? यदि म विदेशी छु भने, म अझै पनि तपाईंको उत्पादन प्रयोग गर्न सक्छु?
12. के तपाईंको समयमा समयसमय गश्ती उपलब्ध छ?
हो यो हो, किनकि टाइमटेक गश्ती क्लाउड-आधार प्रणाली हो, यो इन्टरनेटमा हरेक पटक उपलब्ध छ, विश्वव्यापी पहुँचयोग्य छ।
13. के तपाईं न्यूनतम उपकरण आवश्यकताहरु मा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंलाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको साथ एन्ड्रोइड v4.0.0 ओएससँग र यसको माथि रहेको एक एम्बेडेड एनएफसी सुविधा हुनेछ।
14. म चेकपट्टिको अधिकतम संख्याको बारेमा टाइमटेक गश्ती समर्थन जान्न सक्छु?
तपाईं चेकपोइन्ट सीमाको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन किनभने हाम्रो कुनै पनि छैन।
15. के फरक गार्डले टाइमटेक ग्याटर एपसँग समान स्मार्टफोन स्थापना गर्न सक्छ?
हो। यो TimeTec गश्ती वेब मा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
16. के समान गार्डले आफ्नो गल्ती सत्र समयमा टाइमटेक ग्याट एपसँग स्थापित तीन फरक स्मार्टफोन प्रयोग गर्न सक्दछ?
1. यदि मेरो गार्डन अफ अफ शेर्पा थिए भने, टाइमटेक ग्यारेन्टीले मलाई कसरी सचेत गराउनेछ?
TimeTec गश्ती पुश सूचनाहरू र इमेलहरू पठाउन को लागी उच्च चार्ज गर्न अलर्ट गर्दा जब गार्डन अफ-शेड्यूल थियो। तपाइँले प्रत्येक मार्गमा विभिन्न अलर्ट टाइमर सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
2. क्या टाइमटेक गश्ती लाइभ नक्शा प्रदान गर्दछ ताकि म वास्तविक समय मा कर्तव्य मा मेरो कर्मचारी देख्न सक्छु?
हो। टाइमटेकमा ग्याँस तपाईले चेक म्याचहरूमा स्क्यान गर्दा जीपहरूको जीपीएस स्थानहरूसँग प्रत्यक्ष लाइभ नक्सा सम्मिलित गर्न सक्नुहुनेछ। निर्माणका लागी, सन्दर्भको लागि ट्राभल मार्ग विवरणहरू प्रदान गर्न फ्लोर प्लान प्रयोग गर्न सकिन्छ।
3. के मेरो कर्मचारीले आफ्नो यात्राको समयमा नियंत्रण कक्षमा अधिसूचनाहरू पठाउन सक्दछ? यदि हो, कसरी?
हो। गार्डहरूले घटना रिपोर्ट र फारमको समयमा टाइमटेक ग्याट एपको माध्यमबाट एसओएस सचेतहरूको सूचनामा सूचना दिन्छ। एकपटक अधिसूचना पठाइए पछि, यो तुरुन्तै नियन्त्रण कक्षमा नियन्त्रण कक्षमा प्रतिबिम्बित गरिनेछ।
राउन्डको दौडान, गार्डहरूले केहि प्रश्नहरू सोध्नेछन् जुन तिनीहरूको गश्ती मार्गमा प्रशासकको सेटिङको अनुसार जवाफ दिन आवश्यक छ, उदाहरणको लागि, त्यहाँ कुनै विच्छेद विन्डो हो? जवाफ होईन रिपोर्ट रिपोर्ट कक्षमा फिर्ता पठाउँनेछ र गार्डले रिपोर्टसँग संलग्न गर्न फोटोलाई स्न्याप गर्नु पर्छ। गार्डहरूले घटनाहरू रिपोर्ट गर्न सक्दछन् जब तिनीहरू सामान्य बाहिर जान्छन्।
गर्ड्सहरूले एसओएस प्रकार्यलाई आपात स्थितिको समयमा सहयोग माग्न प्रयोग गर्न सक्दछ। एसओएसले स्मार्टफोनबाट अलर्ट आवाज ट्रिगर गर्नेछ, एलईई लाइट ब्लकिङ तुरुन्तै बनाउनेछ, स्वचालित रूपमा अगाडि फोटोहरू फोटो खिच्दछ र सबै जानकारी नियन्त्रण कक्षमा तुरुन्त हालको जीपीएस स्थानसँग पठाइनेछ।
बरु, नियंत्रण कक्षका अधिकारीहरूले कर्तव्यमा गार्डरहरूलाई अधिसूचना पठाउन वा कर्तव्यको क्रममा थप कार्यहरू पूरा गर्न पठाउन सक्छन्।
4. यदि कुनै पनि टूरको दौडान कुनै सही थिएन भने, के त्यहाँ कुनै पनि तरिका हो कि मेरो गार्डहरूले मलाई घटना वा तस्वीरहरु वा ध्वनि जस्ता घटनाहरुका बारेमा थप जानकारीको साथ सम्पर्क गर्न सक्दछन्?
हो। माथिको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
5. क्यान्सर कोठाले कर्तव्यमा गार्ड गर्न कार्यहरू पठाउन सक्छ?
हो। माथिको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्
6. घटनाक्रमलाई गश्तीको दौडान कसरी रिपोर्ट गर्ने?
7. के ती प्रश्नहरू सजिलै परिवर्तन हुनसक्छन्?
केवल व्यवस्थापकले प्रत्येक चेकपोइन्टमा तोकिएको प्रश्नहरू सम्पादन वा परिवर्तन गर्न अधिकार छ
8. तिनीहरूले घटना रिपोर्टमा के संलग्न गर्न सक्छन्?
9. के तपाईं ग्राहक रिपोर्टलाई घटना रिपोर्ट पठाउनुहुन्छ?
हो। टाइमटेक गश्तीले ग्राहक रिपोर्टहरू ईमेल वा मोबाइल पुश सूचना मार्फत घटना रिपोर्ट पठाउन सक्दछ।
10. के मैले आफ्ना गार्डहरूका लागि निर्धारित गश्ती मार्गहरू बनाउन सक्छु?
हो, तपाईं टाइमटेक गश्ती वेब पीसी पोर्टल मार्फत यो गर्न सक्नुहुनेछ।
11. के म पीसी र मोबाइलबाट मार्ग अनुसूची गर्न सक्छु?
वर्तमान हामी केवल पीसी वेब पोर्टल देखि समय तालिका सेटअप को अनुमति दिन्छौं।
12. कसरी गार्डले निर्धारित मार्गहरू हेर्न सक्छ?
तिनीहरूले हस्ताक्षरित मार्गहरू टाइमटेक ग्याट एपमा साइन इन गर्दा हेर्न सक्छन्।
13. कस्तो प्रकारको रिपोर्ट टाइमटेक ग्यास प्रदान गर्दछ? र कुन ढाँचामा?
टाइमटेक ग्याटमा3रिपोर्टहरू उपलब्ध छन् जसमा घटना रिपोर्ट, गश्ती रेकर्डहरू र मासिक पेट्रोल रेकर्डहरू समावेश छन्। र त्यहाँ4सूचीहरू उपलब्ध छन् जुन फ्लोर प्लानहरू र चेक पोष्टहरू, सुरक्षा गार्ड्समा ड्यूटी, घटनाहरूको सूची र अधिसूचनाहरू, ग्याँस मार्ग र चेकपोइन्टको सूची। सबै PDF, XLS, XLSX र RTF ढाँचामा उपलब्ध छ।
14. के यी रिपोर्टहरू मोबाइल अनुप्रयोगमा हेर्न सकिन्छ?
हाल, यो विकल्प छैन।
15. के म यी रिपोर्ट छाप्न सक्छु?
हो तिमि सक्छौ।
16. के ती रिपोर्टहरू तेस्रो पार्टीमा निर्यात गर्न सकिन्छ?
हो तपाइँ तेस्रो पार्टी प्रणालीमा रिपोर्ट गर्न XLS वा XLSX ढाँचामा रिपोर्टहरू निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं TimeTec गश्ती बाट डेटा सङ्कलन गर्न TimeTec SDK प्रयोग गरेर विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
17. के पर्यवेक्षकले आफ्नो स्मार्टफोन र डेस्कटपमा अलर्ट प्राप्त गर्न सक्छन्?
18. यदि एक पर्यवेक्षकले गश्ती अनुसूचीलाई त्याग्छ भने, के गार्डलाई तुरुन्तै सूचित गरिनेछ?
हो, परिवर्तनहरू गार्डको मोबाइल अनुप्रयोग तुरुन्तै प्रतिबिम्बित हुनेछ।
19. यदि सुरक्षा गार्ड 'स्मार्टफोन्स ब्याट्रीबाट भाग्यो, कसरी उनीहरूले राउन्डको दौडान चेक इन गर्न सक्थे?
कम्पनीलाई तीव्र गर्न आवश्यक छ कि यो गार्डहरूको जिम्मेवारी हो कि यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तिनीहरूका स्मार्टफोनहरूसँग टूर सुरु हुनुअघि पर्याप्त ब्याट्री छ। तथापि, परिस्थितिमा जहाँ स्मार्टफोनको ब्याट्री घटाउँछ, हामी ब्याकअपको रूपमा पावर बैंकको प्रयोगलाई सिफारिस गर्छौं ताकि तिनीहरूले राउन्डको दौडान उनीहरूको चेक-इन पूरा गर्न सक्दछ।
20. के गार्डले चेक-ईन गर्न सक्छ यदि चेकपोइन्टको स्थानमा कुनै इन्टरनेट जडान छैन, जस्तै तहखाने पार्किङमा?
टाइमटेक गश्ती मोबाइल एपसँग अफलाइन मोड छ जहाँ संरक्षकले मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्दछ र चेक-ईन गर्न सक्दछ तापनि कुनै जडान छैन भने। अफलाइन मोडको बारेमा यहाँ जान्नुहोस्।
4. मैले टाइमटेकबाट चालानहरू कसरी कति पटक प्राप्त गर्नेछु?
TimeTec गश्ती एक SaaS सदस्यता मोडेल हो जसले तपाईंको भुक्तानी चक्र निश्चित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं वार्षिक रूपमा अग्रिम तिर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईं अर्ध-अर्ध तिर्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
5. क्या केहि समय मा म टाइमटेक ग्याँस निश्चित छ या यो स्केलेबल छ?
TimeTec गश्ती लचीला छ र तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरु मा आधारित आफ्नो खरीद समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं इजाजत पत्र थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं पनि कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं सक्नुहुन्छ। चीजहरू खरिद नगर्नुहोस्।
6. म टाइमटेक गश्ती कसरी खरीद गर्छु?
निश्चित रूपमा होइन। चूंकि हामी तपाईंलाई क्रेडिट कार्डको जानकारीको लागि कहिल्यै सोध्दैनौं, हामी समाधानको लागि तपाईँलाई शुल्क लगाउने छैनौं र तपाईं स्वत: नामाकरण हुने छैनौँ।
निश्चित रूपमा होइन। तपाईंले पूर्ण समाधान अनुभव गर्न इरादामा परीक्षण अवधि, यसैले तपाइँसँग वेब र मोबाइल अनुप्रयोग दुवैको पहुँच पूरा हुनेछ।
4. तपाईं TimeTec TA को लागि केहि नि: शुल्क लाइसेन्स प्रदान गर्दछ, टाइमटेक गश्ती मा पनि लागू हुनेछ?
दुर्भाग्यवश, जवाफ कुनै छैन। हामी टाइमटेक गश्तीको लागि कुनै पनि नि: शुल्क इजाजतपत्र प्रस्ताव गर्दैनौँ।
2. के मैले कम्पनीको डेटा पुन: प्राप्त गर्न सक्दिन जब हाम्रो कम्पनीले टाइमटेक सदस्यता समाप्त गर्न निर्णय गरेको थियो?
1. मैले टाइमटेकको लागि प्राविधिक सहयोग कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
हाम्रो टेक्नोलजी टीम LiveChat मार्फत पहुँचयोग्य छ, टाइमटेक सफ्टवेयरमा सजिलै उपलब्ध उपलब्ध च्यानल च्यानल र तिनीहरू पनि ईमेलको माध्यमबाट अग्रिम सम्पर्क support@timeteccloud.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। टाइमटेक समर्थन 24 घन्टा, हप्ता7दिन, सबै वर्षको राउन्ड उपलब्ध छ।
2. म TimeTec गश्ती संग परिचित छैन। मेरो खाता सेटअप गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो?
3. म TimeTec पेट्रोल मा अधिक बुझ्न चाहन्छु। के त्यहाँ भाग लिन सक्ने प्रशिक्षण छ?
हामी टाइमटेक गश्तीको लागि प्रत्येक महिना वेबिनार सत्र व्यवस्थित गर्दछौं। तपाईं समाधानमा थप बुझ्नको लागि सामेल हुन स्वागत छ। सत्र नि: शुल्क छ, तर तपाईंलाई सत्रमा सामेल हुन अघि आफ्नो सीटहरू आरक्षित गर्न आवश्यक छ। वेबिनार सत्रका लागि समय चाँडै उपलब्ध हुनेछ।
1. यो प्रणालीको लागि आवश्यक उपकरणहरू के हो?
एन्ड्रोइड फोनहरू र मानक एनएफसी ट्यागहरू।
2. के म टाइमटेक ग्याँस एपको लागि मेरो एप्पल आई-फोन प्रयोग गर्न सक्छु?
दुर्भाग्यवश टाइमटेक ग्याट एप एनएफसी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दैछ, जुन हाल एप्पल आईफोन आईओएस द्वारा समर्थित छैन। हामी टाइमटेक गश्तीको लागि एन्ड्रोइड प्रयोग गर्दैछौँ
3. NFC ट्यागहरू सुन्दर स्तर हुन्, त्यसैले कुनै ब्रान्ड उपयुक्त हुनुपर्छ।
NFC ट्यागहरू सुन्दर स्तर हुन्, त्यसैले कुनै ब्रान्ड उपयुक्त हुनुपर्छ।
4. के म एन्ड्रोइड फोनको कुनै ब्रान्ड खरीद गर्न सक्छु?
हो, टाइमटेक ग्याट एपलाई एन्ड्रोइड फोनका साथ प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ जुन बजारमा सजिलै उपलब्ध छ।
5. टाइमटेक गश्तीको साथ ग्याङ्गल गर्दा एक स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण उपकरण हो। धेरै स्मार्टफोनहरू र फोनको उपयोग फ्रिक्वेसी प्रयोग गरेर, के तपाइँसँग हानिबाट स्मार्टफोन कसरी सुरक्षा गर्ने बारे कुनै सिफारिस छ?
हामी सिफारिस गर्दछौं कि स्मार्टफोन्सहरू उच्च-सुरक्षा सुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरूमा संलग्न हुन्थे। उच्च अन्तका घटनाहरू सामान्यतया मोटाईरहेछ, छेउमा परेका हुन्छन्, र केहि पनि पनरोक हुन्छन्। जसले स्मार्टफोन्सलाई हानिबाट जोगाउँछ।
6. म स्मार्टफोनहरूको सुविधाहरूलाई मेरो गार्डमा प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ। के म त्यसो गर्न सक्छु? के हो भने गार्ड कम्पनीको फोनबाट टाढा छ?
स्मार्टफोनमा अनुप्रयोगलाई सीमित गर्न, हामी स्मार्टफोनहरूलाई गार्डमा लगाउनु अघि "एप-लक" अनुप्रयोग स्थापना गर्न कम्पनीलाई सिफारिस गर्छौं। "एप-लक" अनुप्रयोगले स्मार्टफोनलाई अन्य कुनै पनि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न वा सुरुवात गर्न बन्द गर्दछ, र यसले प्रयोगकर्तालाई "एप-लक" अनुप्रयोग स्थापना रद्द गर्न वा टाइमटेक ग्याट एपबाट निस्क्रिय पार्नेछ। यदि एक गार्ड फोनसँग टाढा छ भने कम्पनीले मेरो मोबाइल पोर्टललाई कुनै वेब पोर्टलबाट पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सक्दछ।
1. यदि एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम अनुसरण गर्न असफल भए, टाइमटेक गश्ती यसलाई कसरी सम्भाल्नेछ?
TimeTec गश्ती इमेल को माध्यम ले अलर्ट संदेश पठाउनेछ र कर्मचारियों को अधिसूचना लाई धक्का दिनेछ र व्यवस्थापक को शेड्यूल को बदलन को लागि अर्को गार्ड प्रदान गर्न सक्छ।
2. के सुरक्षा कम्पनीहरूले गार्डहरूका लागि स्मार्टफोन तयार गर्न वा उनीहरूको आफ्नै प्रयोग गर्न सक्दछ?
तपाईं पनि एक छान्नुहोस्। यद्यपि, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्मार्टफोनहरू टाइमटेक ग्यार्टमा प्रयोग हुन सक्नु अघि।
3. TimeTec गश्तीको लागि न्यूनतम स्मार्टफोन चश्मा के हो?
OS v 4.0.0 र माथिको कुनै पनि Android फोनको साथमा एनएफसी प्रकार्यतासँग आउँछ।
4. के गार्डले फोनबाट गश्ती मार्ग हटाउन सक्छ? प्रशासनले पनि गर्न सक्छ?
न त गार्डले फोनबाट गश्ती मार्ग मेट्न सक्छ, न त प्रशासक। केवल प्रशासकले समयतालिका गश्ती वेब पोर्टलको माध्यमबाट गश्ती मार्गहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
5. TimeTec गश्ती संग, हामी जीपीएस को प्रयोग गरेर गार्ड को स्थान ट्रेस गर्न सक्छन्, लाइव ट्रैकिंग को सटीकता को बढाने को कुनै तरीका छ?
हाल, जीपीएस स्थान अन्तिम ज्ञात स्थान देखाउँदा जब गार्डेन्टहरूमा पोष्टहरूमा ट्याप हुन्छ।
6. त्यहाँ कुनै पनि तरिका छ कि स्थान गार्ड द्वारा हेरफेर किया छ? यदि हां, त्यस स्थितिसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
यो सम्भव छैन किनभने टाइमटेक ग्याट एपले वास्तविक समयको स्थानमा क्याप्चर गर्दछ जब गार्डेले चेक प्वाइन्टमा स्क्यान गर्दछ र यसलाई स्वचालित रूपमा प्रणालीमा पठाइनेछ।
7. टाइमटेक गश्ती अनुप्रयोगमा अफलाइन मोड कसरी काम गर्दछ?
अफलाइन मोड गश्ती स्थानहरूको लागि सेलुलर सिग्नल छैन भनेर पूरा गर्न डिजाइन गरिएको छ। त्यसोभए, हालसम्म डेटा, मार्गहरू र टाइमटेक सर्वरबाट घटना सूचिहरू पुन: प्राप्त गर्न इन्टरनेट कनेक्टिविटी हुँदा त्यहाँ अफलाइन मोड खोल्नुहोस्। एक पटक गल्ती गरिसकेपछि, डेटा डाटामा ट्याप गर्न अपलोड डेटामा ट्याप गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि कृपया यहाँ विस्तृत चरणहरू हेर्नुहोस् ।
1. टाइम टेक पेट्रोल इजाजतपत्र कसरी खरीदें
TimeTec अफरहरु को समय को लागि टाइमटेक गश्ती पहिलो हात को अनुभव गर्न को लागि मुफ्त परीक्षण। टाइमटेक गश्ती लाइसेन्स प्रति ब्लक प्रति महिना 20 डलर प्रति 10 ब्लकमा बेचेको छ। थप जानकारीको लागि, http://www.timetecpatrol.com/pricing पढ्नुहोस्
2. टाइमटेक गश्ती अनुप्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्मार्टफोन टाइमटेक गश्ती वेब पोर्टलसँग दर्ता गरिएको छ।
Google Play मा स्मार्टफोनमा उपलब्ध TimeTec गश्ती एप स्थापना गर्नुहोस्।
लगइन पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
र यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। गार्डहरूको लागि, प्रत्येक एनएफसी चेकपपमा ट्याप गर्न र तदनुसार घटनाहरूको रिपोर्ट गर्न गार्ड ग्याँसको दौरामा TimeTec ग्याट एप प्रयोग गर्नुहोस्।
3. कसरी चेक अंक सिर्जना गर्ने
यो स्थान र चेकटाइक टाइमटेक गश्ती वेब पोर्टलको अधीनमा गरिन्छ। प्रशासकले टाइमटेक गश्ती अनुप्रयोग प्रयोग गरेर हरेक चेकप्रेसलाई दर्ता गर्नुपर्दछ। यसको अद्वितीय जानकारी प्राप्त गर्न एनएफसी ट्यागमा स्मार्टफोन ट्याप गर्नुहोस् र यसलाई गश्ती मार्गको लागि चेकपोइन्टको रूपमा असाइन गर्नुहोस्।
4. गार्डमा चेक अंक कसरी असाइन गर्ने?
ग्यारेन्टी नियमहरु संग पूर्ण अनुक्रम मा एकाधिक चेकपट्टिहरु को व्यवस्था गरेर प्रशासक को मार्ग बनाउन को आवश्यकता हो। मार्गहरू सिर्जना भएपछि, प्रशासकले उनीहरूको विशेष मार्गहरूको साथमा गार्ड गर्न सक्दछ।
5. कसरी भ्रमण क्षेत्रहरू ट्राभल गर्ने
यो TimeTec गश्ती मा पृष्ठ को निगरानी को लागी गरिन सक्छ। जब गार्ड्ट गेटिङ गर्न थाल्छन्, गश्ती भ्रमणका जानकारीहरू समय समयमा उपलब्ध हुनेछन् समय समयमा गेट्रोल वेबमा वास्तविक समयमा प्रदान गरिएको छ कि स्मार्टफोनको इन्टरनेट उपलब्ध छ। सबै क्रियाकलापहरू, समय, रिपोर्टहरू, फोटोहरू र आदि टाइमटेक गश्ती वेबमा "प्रत्यक्ष" हुनेछ।
6. गार्ड प्रदर्शन कसरी मूल्याङ्कन गर्ने
यो वेब संस्करणमा गश्ती रेकर्ड पृष्ठको अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। चेकपोइन्ट स्क्यान समयका विवरणहरू, ढिलो / प्रारम्भिक स्क्यान, कुल चेकप्यान स्क्यान / मिस र आदि मूल्याङ्कनका लागि यस पृष्ठमा प्रकाशित गरिएका छन्।
7. रिपोर्टहरू कसरी सिर्जना गर्ने र वास्तविक समयमा ग्राहकहरूलाई पठाउनुहोस्
एक पटक गार्डर घटना रिपोर्ट पठाउँदा, नियन्त्रण कक्ष वास्तविक समयमा तुरुन्तै रिपोर्ट पाउनेछ। चाहे तपाईं यसलाई आफ्नो क्लाइन्टसँग साझा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ वा तपाईंको निर्णय हो, तर तपाईं सक्नुहुन्छ।
8. आपातकालीन स्थिति कसरी हल गर्ने
टाइमटेक पेट्रोल एपमा एक SOS बटन छ। गर्ड्सहरूले एसओएस प्रकार्यलाई आपात स्थितिको समयमा सहयोग माग्न प्रयोग गर्न सक्दछ। एसओएसले स्मार्टफोनबाट सचेतना आवाज ट्रिगर गर्नेछ, एलईई लाइट ब्लकिङ तुरुन्तै बनाउनेछ, स्वचालित रूपमा अगाडि फोटोहरू स्न्याप गर्दछ र सबै जानकारी नियन्त्रण कक्षमा भर्खरै हालको जीपीएस स्थानसँग पठाइने छ।
9. अन्य ग्राहकहरूलाई कसरी शिफ्ट लिफ्टहरू पठाउनुहोस्
परिदृश्य 1 : यदि तपाईसँग 20 जना पर्यवेक्षकहरू छन् जुन साइट ए6महिनाका लागि काम गर्दै छन्, र त्यसपछि उनीहरूलाई साईट6मा जानुहोस् अर्को6को लागि, तपाईँलाई आवश्यक पर्ने ठाउँहरू तिनीहरूको लागि पुन: स्थानान्तरण गर्न हो। त्यहाँ लाइसेन्सको स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित कुनै पनि चीज छैन।
परिदृश्य2: यदि यी 20 गार्डरहरु मध्ये 10 तपाईको कम्पनी छोडे र तपाई नयाँ आगमन समुहका लागि लाइसेन्स प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई 10 छोड्ने गार्डहरु लाई निष्क्रिय उपयोगकर्ता सूचीमा सार्न आवश्यक छ भने तपाईले केहि जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ। ती बासिन्दाहरू छोडिदिए। त्यसपछि निष्क्रिय प्रयोगकर्तालाई सार्दा, तपाइँ नयाँ गार्डहरूमा 10 लाइसेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। गार्डहरू हटाउनाले तपाईंलाई सबै जानकारी गुमाउन सक्छ र यो उल्टाउने छैन।
1. टाइमटेक गश्तीले मेरो गश्ती डेटालाई कति लामो बनाउँछ?
टाइमटेक गश्ती तपाईंको गश्ती डेटा को5वर्ष को लागी राख्छ; लाइभ डेटा2वर्षको अवधिमा उपलब्ध छ, र यस अवधि पछि सबै डेटा पुरातत्व3वर्ष सम्मको लागि अभिलेखमा सारिनेछ। थप रूपमा, तपाइँले 1,2वा3वर्षको अतिरिक्त डेटा भण्डारण विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ कम्तिमा कम शुल्कहरू र सङ्ग्रह डेटा समर्थन> संग्रहमा उपलब्ध छ।
2. टाइमटेक गश्ती5डेटा भन्दा लामो समयको मेरो डेटा कसरी शुद्ध गर्दछ?
गश्ती डेटा दैनिक आधारमा बर्खास्त गरिनेछ। उदाहरणको लागि यदि आज 2018-1-1 हो, 2012-12-31 मा गश्ती डेटा बर्खास्त गरिनेछ र दिनभरि जान्छ,5वर्ष अघिको डाटा स्वचालित रूपमा दिनभरि बर्खास्त गरिनेछ।
3. के मलाई म्यानुअल रूपमा मेरो गश्ती डेटा ब्याकअप गर्न आवश्यक छ?
तपाईंको गश्ती डेटा हाम्रो सर्भरमा5वर्ष सम्मको लागि सुरक्षित राखिनेछ, तर हामी सल्लाह दिन्छौं कि तपाईं अभिलेख डेटा राख्नुहुन्छ जुन तपाईंको आफ्नै रेकर्डको लागि5वर्षको अवधिमा राम्रो छ। नोट गर्नुहोस् कि तपाइँ रिपोर्ट बाट गश्ती डेटा निर्यात गर्न र यसलाई तपाईंको स्थानीय पीसीमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
4. म कसरी गश्ती डेटा भण्डारण अवधि विस्तार गर्न सक्छु?
तपाईं अतिरिक्त डेटा भण्डारण अवधि 1,2वा3वर्षको लागि 'एक्सटेन्ड डाटा स्टोरेज अवधि' मा क्लिक गरेर सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ (खाता मालिक वा बिलिङ व्यवस्थापकको लागि मात्र लागू)।
नोट गर्नुहोस् कि शुल्क संग्रहित वर्ष र विस्तारको अवधिमा उपलब्ध प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा आधारित हुनेछ।
तपाईंले समर्थनमा> तपाईको सङ्ग्रहित डेटा देख्नुहुनेछ।
डाटा भण्डारण एक्सटेन्सनको लागि मूल्य निर्धारण यो लिङ्कमा उल्लेख छ।